Nọmba dị n'asụsụ Bekee site na 1 ruo 1000 - UniProyecta
Na ibe a, anyị ga -akuzi usoro dị iche iche ka anyị nwee ike ịmụ bekee n'ụzọ dị mfe na n'ụzọ dị mfe, ọ bụ ya mere taa anyị ga -ahụ nọmba na Bekee: na 1 ruo 10, 20, 50, 100, 1000, 10000, na 1000000Anyị ga -ahụkwa usoro dị mfe maka ụmụaka, vidiyo na ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị tụrụ anya na ọ ga -amasị gị.
Site na nke ahụ ị ga -enwe ike ịmata ọnụọgụ ndị ọzọ, opekata mpe ndị kadinal. Mgbe ahụ enwere ndị ọzọ, dị ka iwu ọdịnala, nke anyị ga -egosikwa gị. Site na ntuziaka a zuru oke ị nwere ike meziwanye nke gị ihe ọmụma na ịkpọ okwu. Ná ngwụsị nke akụkọ a, anyị ga -ahapụrụ gị usoro ihe atụ.
1 Otu esi ede nọmba na bekee
1.4 Ndị Kadịnal
1.5 Ndị nkịtị
2 Ịkpọpụta nọmba n'asụsụ Bekee
3 Ọnụ ọgụgụ na Bekee maka ụmụaka
3.1 Bekee maka ụmụaka site na vidiyo
4 Afọ na Bekee
4.1 Site na 1 ruo 999
4.2 Site na 1000 ruo 1999
4.3 Site na 2000 gaa n'ihu
5 Ntụpọ iri na Bekee
6 Iberibe na Bekee
7 Pasent na bekee
8 Ego na bekee
9 Ihe atụ nke ahịrịokwu nwere ọnụọgụ na Bekee
10 Ihe omume
Otu esi ede nọmba na bekee
Ihe mbụ ị kwesịrị ịmụta bụ ịde nọmba. N'okpuru, ị ga -ahụ ọtụtụ tebụl nwere nọmba ọ bụla n'ụdị ederede ha n'asụsụ Spanish na Bekee. Ị nwere ike iji tebụl ọdịnaya ka ịgagharị n'akụkọ ahụ wee gaa na akụkụ nke masịrị gị n'ịtụle. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike hapụ anyị okwu!
iri na atọ
iri na anọ
iri na ise
iri na isii
iri na asaa
iri na asatọ
iri na itoolu
iri abụọ na abụọ
iri abụọ na atọ
iri abụọ na anọ
iri abụọ na ise
iri abụọ na asaa
iri abụọ na asatọ
iri abụọ na itoolu
iri atọ na otu
iri atọ na abụọ
Iri atọ na atọ
iri atọ na anọ
iri atọ na ise
iri atọ na asaa
iri atọ na asatọ
iri atọ na itoolu
Nke iri anọ
Iri anọ na otu
iri anọ na abụọ
iri anọ na atọ
Iri anọ na anọ
iri anọ na ise
Iri anọ na isii
iri anọ na asaa
iri anọ na asatọ
iri anọ na itoolu
Iri ise na otu
iri ise na abụọ
Iri ato na atọ
Iri ise na anọ
iri ise na ise
Iri na ise na isii
iri ise na asaa
iri ise na asatọ
iri ise na itoolu
iri isii na otu
Iri isii na abụọ
Iri isii na atọ
iri isii na anọ
Iri isii na ise
Iri isii na isii
iri isii na asaa
Iri isii na asatọ
iri isii na itoolu
iri asaa na otu
Iri asaa na abụọ
Iri asaa na atọ
iri asaa na anọ
Iri asaa na ise
iri asaa na asaa
iri asaa na asatọ
Iri asaa na itoolu
iri asatọ na otu
Iri asatọ na abụọ
Iri asatọ na atọ
iri asatọ na anọ
iri asatọ na ise
iri asatọ na isii
iri asatọ na asaa
iri asatọ na asatọ
iri asatọ na itoolu
Iri itoolu na otu
Iri itoolu na abụọ
iri itoolu na atọ
Iri itoolu na anọ
Iri itoolu na ise
Iri itoolu na isii
Iri itoolu na asaa
iri itoolu na asatọ
iri itoolu na itoolu
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ọnụọgụ buru ibu na Bekee, n'okpuru anyị akwadebela tebụl na PDF nke ị nwere ike ibudata na ya nọmba niile dị na Bekee site na 1 ruo 1000 na ntụgharị ya n'asụsụ Spanish. Pịa ebe a ka ibudata PDF.
Anyị ga -akụziri gị ọnụọgụ kadinal n'ụdị: ọnụọgụ n'ime ọnụọgụ - ọnụọgụ na mkpụrụedemede - mkpọpụta okwu. Kedu nọmba kadinal na Bekee? Ha bụ ndị na -enye anyị ohere rụọ ọrụ: tinye, wepụ, kewaa ... Ka anyị bido na iri iri na abụọ mbụ. Nọmba ndị a bụ ndị kacha mkpa na ị kwesịrị ịghọta ha nke ọma.
Mgbe 12 gachara, ọnụọgụ ndị ahụ na -agbaso ụkpụrụ na ederede ha: ha na -ejedebe "Teen". Ha nwekwara usoro (nọmba + nwata) yana ụfọdụ ewezuga dị ka 13, 15 na 18.
Mgbe 19 na -abịa usoro ọzọ: njedebe nke ọnụọgụ okirikiri na "Ị." Dịka ọmụmaatụ, ọnụọgụ iri abụọ n'asụsụ Bekee ka edere iri abụọ. Ha na -edobe otu usoro gara aga (nọmba + ty), ọzọ, ya na ewezuga. N'ime otu ahụ tinye 20, 30, 40, 50 na 80, dị ka egosiri n'okpuru.
Iji dee nọmba ndị ọzọ, ị ga-eso usoro (nọmba gbara okirikiri + nọmba otu-nọmba).
Jiri nlezianya mụọ ọnụọgụ ndị dị n'elu ka ị were nzọụkwụ ọzọ. Ọ ga -abụ ụkpụrụ yiri ya, n'agbanyeghị, n'ụzọ doro anya, yana ọdịiche ya. Echiche bụ isi bụ na ị ga -eji okwu a mee njikọ narị na -ezo aka na "narị" ma ọ bụ "narị otu narị." Dị ka ọmụmaatụ:
ọ dị njọ
Iji dee nọmba ndị fọdụrụ, ị ga -eji njikọ "na" dị ka ndị a:
ị dị otu a
ị nwere mmasị na nke a
five hundred and fifty five
faiv hándred na iri ise faiv
nine hundred and seventy three
náin narị ean seventi zrii
Mgbe ahụ, nkeji ndị ọzọ ga -abịa, nke a ga -ahazi n'otu ụzọ ahụ. Ihe kacha mkpa bụ Puku (
) na nde (
). Lee ụzọ esi ede ụfọdụ ọnụọgụ ndị a.
a na -enye gị otu puku
two thousand seven hundred and fifty six
ị ga -enye puku asaa asaa ean fifti isii
seven hundred twenty four thousand six hundred and fifty eight
asaa dị otu narị afọ gara aga puku isii na narị ise
Rịba ama na n'ihe atụ ikpeazụ anyị butere ụzọ «
seven hundred twenty four
" Kedu ihe ọ pụtara narị asaa na iri abụọ na anọ n’asụsụ Spanish.
Ma mgbe nke ahụ gasị, anyị tinyere okwu ahụ "puku" puku. Na nchikota ọ na-adịgide: «narị asaa na iri abụọ na anọ agha». Ka anyị leba anya na nkeji nde.
one million hundred thousand
puku kwuru puku
nine million thirty thousand hundred
náin milion zérti za thousand handred
seventy million sixty thousand twenty three
iri asaa na iri nde isii iteghete tuenti zrii
Site na nke a ị nwere ike ịmalite ọmụmụ nọmba na Bekee, O doro anya na ụfọdụ ndị ọzọ na -efu, mana nke a zuru ezu ka ị jiri nwayọ malite ịghọta ha.
Nọmba nkịtị, n'adịghị ka ndị nke mbụ, ka eji na -egosi ọnọdụ nke mmewere, dịka ọmụmaatụ, n'asọmpi. Ndị a dị mfe mmụta. Ihe ị kwesịrị iburu n'uche bụ na nọmba 3 nke mbụ n'ime iri ọ bụla, ewezuga ha, na -abịa st (1), nd (2) na rd (3) na ndị ọzọ na th.
Ịkpọpụta nọmba n'asụsụ Bekee
Nzọụkwụ ọzọ n'ịmụta nọmba n'asụsụ Bekee, ka ị matachara ka esi ede ha, bụ ịmata ka esi ekwu ma ọ bụ ịkpọpụta ha. Anyị akwadebeere gị tebụl nwere ọnụọgụ ụfọdụ n'asụsụ Bekee na mkpọpụta ha. Gbalịa onwe gị, ị ga -ahụ ka ị si ada ụda nke ukwuu British:
Ebe ndị a bụ ọnụọgụ ole na ole, anyị etinyekwala vidiyo nke onye na -asụ asụsụ obodo na -eji olu zuru oke agụ nọmba. Site na nke a ị ga -emezu ihe abụọ: gee ntị na ụda olu eke England ma nwaa i imitateomi mkpọpụta okwu:
Ọnụ ọgụgụ na Bekee maka ụmụaka
Obi abụọ adịghị ya na ịkụziri ụmụaka asụsụ Bekee abụghị ọrụ anyị nwere ike were dị ka ihe dị mfe, n'eziokwu ọ gbagwojuru anya, ebe ọ bụ na onye nkuzi ma ọ bụ onye nkuzi ga -emerịrị. ịmara ka esi aghọta ụmụaka ka ụzọ ha wee nwee nsonaazụ na -ekwenye ekwenye. Nke ahụ bụ ikwu na ọ bụghị naanị ịmalite dị ka a ga -asị na ọ bụ klaasị ọ bụla maka ndị na -eto eto ma ọ bụ ụmụaka toro eto, kamakwa na a ga -ejirịrị usoro ụfọdụ site na nke ọ ga -ekwe omume ịdọrọ uche nwata ahụ ịkụziri ha Bekee.
Ụzọ kacha mma a ga -esi akụziri ụmụaka Bekee bụ igosi ha asụsụ ọhụrụ a n'ụdị egwuregwu, ya bụ, na -achọ ihe ọchị ụmụ nwoke mgbe niileN'ụzọ dị otu a, ọ gaghị esiri ha ike ị attentiona ntị, mana ọ ga -adị iche n'ihi na ọ ga -amasị ha igwu egwu nke ukwuu iji mụta ihe nọmba na Bekee. Nwatakịrị ahụ ga -enwerịrị ike itinye aka na ikuku a, ọ ga -echekwa na ihe niile gbara ya gburugburu bụ n'asụsụ Bekee ka o wee nwee ahụ iru ala.
Ka ụmụaka wee nwee ohere ịmụta ọnụọgụgụ, ka m gwa gị na ị nwere ọtụtụ egwuregwu, egwu na ọtụtụ ụzọ, n'ezie nke kachasị mma bụ ka ị kuziere ha nọmba site na 1 ruo 10 yana ka ha na -etolite ma dabere imeghari ị nwere ike họrọ ịbawanye ego nke nọmba na ụmụaka na -amụta ihe. N'ụzọ dị otú a ụmụaka nwere ike ịmụta ihe ahụ n'ụzọ dị mfe nọmba na Bekee ma nwee obi ike na ị ga -ahụ nsonaazụ nke mmụta ha nke ọma.
Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ nhọrọ ịkụziri ụmụaka na eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime ha bụ ọrụ onye nkuzi. N'ebe a, anyị na -ahapụrụ ha gị ọtụtụ, nke anyị nwere ike ịhụ:
Bekee maka ụmụaka site na vidiyo
Obi abụọ adịghị ya na obere ụmụaka, ka o kwesịrị ekwesị ịmalite ịkụnye asụsụ bekee n'ime ha, agbanyeghị anyị nwere ike ijide n'aka na ọ dịkwa ike karịa, dịka ọ na -esiri ụmụaka ike itinye uche ha N'ime ihe ha na -amụ, n'ezie ọ chọrọ ka ejiri usoro pụrụ iche, nke ga -enye ha ohere itinye uche na inwe anụrị, n'ihi na ọ bụghị m chere na ọ ga -esiri m ike idobe uche ha ma hụ na ụmụaka nwere ike ịmụta ihe.
Anyị na -achọkarị itinye uche na isiokwu nke ọnụọgụ mmụta, ebe ọ bụ na oge ọ bụla ị na -akụziri nwata asụsụ bekee, ị ga -ebido na ntọala, ya bụ, na olu, mkpụrụedemede na ọnụọgụ, ịnweghị ike ịmalite ịkụziri nwata ụtọ asụsụ, mana ị ga -emerịrị ya site na nkwụsị.
Maka ụmụaka, a ga -emerịrị mmụta n'ụzọ mmekọrịta kpamkpam, enwere ike nweta nke a site na iji vidiyo, ebe ọ bụ na dịka ị marala. ụmụaka nwere mmasị n'ezie ikiri telivishọn, ọkachasị ma ọ bụrụ eserese. Anyị na -akwado ka ị nweta vidiyo nwere ihe osise nwere abụ nke egosipụtara ọnụọgụgụ, n'ụzọ dị otu a nwata nwoke a ga -eche na ọ na -ekiri mmemme telivishọn na ị ga -adọrọ uche ya ozugbo.
Ihe onyonyo ndị vidiyo ndị a nwere, na mgbakwunye na ịkpọpụta okwu na ụda, ga -eme ka nwata nwoke ahụ mụta asụsụ Bekee n'ụzọ dị mfe, enweghị mgbagha na anyị na -ekwu maka otu n'ime usoro kachasị mma iburu n'uche, n'ihi na iji taa, ụdị ihe onyonyo a adịla mkpa inwe ike ịmụ bekee, ọkachasị maka ụmụaka.
Afọ na Bekee
A na -ede ma na -ekwu afọ n'afọ Bekee n'ụzọ dị iche. Enweghị ọtụtụ nsogbu, naanị ị ga -ekewa ya nọmba na ọnụ ọgụgụ. Ụzọ nke ide afọ na -adịgasị iche dabere na mpaghara ha nọ, yana kwa ụfọdụ.
Usoro atọ dị adị bụ: site na 1 ruo 999, site na 1000 ruo 1999 na site na 2000 gaa n'ihu.
Site na 1 ruo 999
Afọ ndị a, nke nwere ọnụọgụ atọ, nwere ike kewaa ya na ọnụọgụ abụọ, otu n'ime ha onu ogugu na ndị ọzọ si abuo, ọmụmaatụ:
N'asụsụ Spanish ọ ga-adị ka ịsị "asaa na iri atọ na asatọ." Ị nwekwara ụzọ ọzọ esi ede ha, nke bụ otu ihe ahụ ị hụburu.
seven hundred and thirty eight
Kedu ụzọ ọ bụla dị mkpa. Na nke izizi, ị ga -ede nọmba nke nọmba nke mbụ yana ngwakọta n'etiti ọnụọgụ abụọ fọdụrụ. Na nhọrọ nke abụọ ị ga -ede ọnụọgụ zuru ezu. Lezienụ anya n'ihe atụ ndị a:
ise narị afọ
abụọ narị afọ
eight hundred and eighty nine
itoolu iri itoolu na itoolu
six hundred and seven
isii oh asaa
seven hundred and three
asaa oh atọ
Lee ihe atụ atọ mbụ, mgbe bụ otu afọ n'etiti 1 na 99, enweghị ike ịgbanye ya n'ime ọnụọgụ. A pụghị ime nke ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ a afọ narị afọ. N'ọnọdụ ahụ a nabatara itinye okwu ahụ narị ma ọ bụ otu narị afọ. Lezienụ anya n'ihe atụ abụọ gara aga, rịba ama na enwere "oh" kama ịbụ "efu". Ịkwesịrị ịme ya otu a oge ọ bụla ịchọrọ ịkọwa ruo 0 n'afọ. Ihe atụ ndị a bụ otu ụzọ ezighi ezi ide ha:
seven zero three
Site na 1000 ruo 1999
Afọ ndị a, ebe enwere ọnụọgụ 4, ọ ga -ekwe omume kewaa ha akụkụ hà ma dee ha otu ahụ. Dị ka ọmụmaatụ:
Enwere ihe ndị ọzọ ebe a, oge a na afọ na -agwụ na efu abụọ (0) dị ka ndị a:
Edere mkpụrụedemede abụọ mbụ dị ka nọmba kadinal site na 10 ruo 19, na okwu abụọ ahụ bụ "narị" na -anọchite anya efu abụọ (0).
Site na 2000 gaa n'ihu
Edere afọ 9 mbụ nke 2000 n'otu ụzọ ahụ anyị gosirila gị na nọmba kadinal:
Site mgbe ahụ gaa n'ihu, enwere ike ide ha ka ha kewaa ha abụọ, dị ka anyị mere n'afọ ndị gara aga, ma ọ bụ mee dị ka ọnụọgụ eke.
iri abụọ na iri
wo thousand fourteen
Ntụpọ iri na Bekee
Mkpebi iri na bekee bụ obere ihe ma ọ bụrụ na ị mụọ akwụkwọ ntuziaka a nke ọma. N'asụsụ bekee, ejighị commas (,) egosipụta ọnụọgụ nwere ntụpọ iri, kama ọ bụ isi ihe (.). Ị ga -ederịrị akụkụ niile oge niile (ọ bụrụ na ọ dị), wee tinye "ntụpọ" wee dee nọmba nke ọzọ n'otu n'otu.
fifteen point seven three
Iberibe na Bekee
Tupu ịmalite na irighiri ihe ndị ahụ, ị ​​kwesịrị icheta na ọnụọgụ bụ elu nke pere mpe na denominator ala. Edere nọmba ndị ahụ Nọmba kadinal, mgbe denominators na nọmba ọnụọgụgụ.
Mgbe elu nke akụkụ ahụ pere mpe karịrị 1, ala ya bụ ọtụtụ. Na mgbe denominator bụ 2, a na -ede "
»Mgbe ọnụọgụgụ bụ 1, na«
»Mgbe o mere okenye.
a half o half
45 / 9 f
Pasent na bekee
Iji dee ma ọ bụ kwupụta pasentị n'asụsụ Bekee, naanị ị ga -etinye okwu "percent" na njedebe nke ọnụọgụgụ. Ị ga -ede nọmba na nọmba nke mbụ.
zero point zero five percent
one point seven percent
Ego na bekee
Ikwu maka ego n'asụsụ Bekee na -eweta ihe niile ị hụlarị ọnụ. Iji mee nke a, ị ga -ederịrị ọnụọgụgụ niile dịka ọnụọgụ kadinal ọ bụla wee kpọtụrụ aha Ego ahụ. Ọ bụrụ na enwere decimals, kama “isi” ị ga -etinyerịrị "na" yana aha nke obere ego ahụ.
three dollar and ninety nine cents
Ihe atụ nke ahịrịokwu nwere ọnụọgụ na Bekee
Enwere m ụmụ nwoke abụọ
i got a ten in math
Enwetara m iri na mgbakọ na mwepụ
Sofia has more than twenty three books
Sofia nwere ihe karịrị akwụkwọ iri abụọ na atọ
one hundred and fifty athletes participated
otu narị na iri ise ndị egwuregwu sonyere
he factory produces more than five million soaps
ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -emepụta ncha karịrị nde ise
on the farm there are seventy three cows
enwere ehi iri asaa na atọ n'ugbo
the car costs ten thousand five hundred euros
ụgbọ ala na -efu puku iri na narị ise euro
i’ve seen the movie seven times
ahụla m ihe nkiri ahụ ugboro asaa
iko mba ụwa puku abụọ na iri na anọ nọ na Brazil
the soccer world cup two thousand fourteen was in Brazil
a mụrụ nwa m nwoke n'ime afọ iri na itoolu na iri itoolu na asatọ
my son was born in the nineteen ninety-eight
PI hà nhata atọ otu otu anọ otu ise itoolu ...
PI is equal to three point one four one five nine…
ama m nwere ụdị asatọ efu nke gam akporo
my smartphone has the eight point zero version of Android
otu ụzọ n'ụzọ atọ bụ nha efu atọ atọ atọ atọ atọ ...
one third is equal to zero point three three three three three…
azịza ya bụ ụzọ abụọ n'ụzọ ise
the answer was two fifths
ọrụ a bụ pasentị iri
the commission is ten percent
n'ọnwa a enwetara m isi atọ pasent iri abụọ na ise
this month I won three points twenty five percent
ha ji m dollar ise
they owe me five dollars
ọ na-eri otu euro na centi iri asaa na isii
it cost one euro and seventy-six cents
Ọzọ, anyị akwadeberela gị mmemme ole na ole ka ị nwee ike nwalee ihe ọmụma gị gbasara ọnụọgụgụ na Bekee. Ị nwere ike ịtụle ihe anyị na -amụta n'ime akụkọ a na -enweghị nsogbu, ihe dị mkpa bụ ka ị debe ihe ndị bụ isi na isi ihe 🙂 jisie ike!
Kedu ka ị si asụpe nọmba 5 na Bekee?
Atọ tinyere iri isii hà nhata ...
Kedu ka m si mara Tụgharịa asụsụ ka ọ bụrụ Bekee ahịrịokwu na -esonụ: «Nna m Vicente dị afọ 48»
Papa m Vincent dị afọ iri isii na asatọ
Enyi m Vincent dị afọ iri ise na asatọ
Papa m Vincent dị afọ iri anọ na asatọ
iri na abụọ
Iri isii na isii tinyere iri abụọ hà nhata ...
Kedu ka edere ya iri na asaa na spanish?
Kedu nọmba iri isii na asaa?
Abụọ gbakwunyere atọ hà nhata ...
Categories Asụsụ, Inglés Igodo bọtịnụ
Nọmba German sitere na 1 ruo 1000
Nkwupụta okwu na Bekee
Inicio » Asụsụ » Inglés » Nọmba Bekee sitere na 1 ruo 1000
Nọmba Prime site na 1 ruo 10.000